Revive Social: Zigharịa ọdịnaya gị nke ochie gaa na Social Media | Martech Zone
Revive Social: Dụgharịa ọdịnaya gị ochie na Social Media
Tuesday, October 6, 2020 Monday, October 5, 2020 Douglas Karr
Y’oburu n’inwe mbipute nke WordPress dika nkem nke nwere otutu puku ederede, igha mara na inwere ihe di egwu nke na anwu… n’ihi na igaghi akwado ya. Social media bụ ihe ịtụnanya ebe ụgbọala mkpa ọbịa azụ gị mbipụta… ma tara akpụ ọrụ nke kwụ n'ahịrị na usoro ihe omume ochie ọdịnaya bụ nke ukwuu nke na ọtụtụ ụlọ ọrụ aka.
Akwalite Old Post bụ ezigbo WordPress ngwa mgbakwunye na-enyere ndị nkwusa na ụlọ ọrụ ndị nwere ọtụtụ ọdịnaya aka ịtụte ọdịnaya ahụ site na ịtọgharịa ya na mgbasa ozi mmekọrịta.
Revive Old Post Atụmatụ
Kekọrịta na Social Media - Facebook, Twitter, LinkedIn, Google My Business - ma weta netwọkụ mmekọrịta gị site na Nchekwa. N'ụzọ bụ isi, a na-akwado netwọ mmekọrịta mmadụ niile ama ama. Revive Old Posts na-enye gị ohere ịkekọrịta ọdịnaya gị na ọtụtụ akaụntụ na nke ọ bụla n'ime netwọkụ mmekọrịta na-akwado. Enweghị njedebe.
Jide Yourkekọrịta Gị - Ma ị chọrọ ịkekọrịta naanị aha nke posts gị, gụnye hashtags, gbakwunye ederede omenala ma ọ bụ belata njikọ gị. Revive Old Posts na-enye gị ohere ime nke ahụ, na ndị ọzọ.
Mepụta Hashtags na akpaghị aka - Ka Revive Old Posts tinye ihe kacha mma hashtags na-akpaghị aka site na iwepụta ha site na edemede, mkpado, ma ọ bụ ọbụna mpaghara omenala.
Sochie Clicks gị - Revive Old Posts na - arụ ọrụ na ọrụ mkpụmkpụ URL ndị kachasị ewu ewu ma jikọta ya na Nchọpụta Mgbasa Ozi Google Analytics. Nke a na - enyere gị aka ịhụ etu ederede gị si ewu ewu ma nyochaa okporo ụzọ na - abịa na saịtị gị site na Social Media.
Ekekọrịta posts, Peeji, Media, na Custom Post Types - Ma ọ bụ posts, peeji nke, onyonyo site na WordPress Media Library gị, WooCommerce ma ọ bụ Nnukwu Ahịa Ngwaahịa, Ntụziaka ma ọ bụ Mmemme; Gbanwee akwụkwọ ochie nwere ike ịkekọrịta ha na akaụntụ mgbasa ozi gị.
Ekekọrịta posts gị karịa otu oge - Ekwela ka ihe ị na-ede kpụọ mgbe naanị otu mgbasa ozi mgbasa ozi kesara. Revive Old Posts na-enye gị ohere ịkekọrịta ọdịnaya weebụsaịtị gị na ntụgharị.
Ekekọrịta posts na Kwusaanụ - Emeela ọdịnaya dị egwu na weebụsaịtị gị? Gwa ya na akaụntụ mgbasa ozi gị ozugbo ị pịa bọtịnụ mbipụta! Ihe omume a na aru oru na ederede WordPress nke aga eme ndu n’oge ozo.
Nyocha Tags na edemede Site Akaụntụ - Nịm na Tags, Atiya, na ndị ọzọ WordPress taxonomies ị chọrọ ka ewepu ma ọ bụ gụnyere maka ịkekọrịta na kwa-akaụntụ ndabere. Ọ bụrụ na post nwere ngalaba ewepụrụ na ekenye ya, mgbe ahụ ọ gaghị ekekọrịta na akaụntụ ebe ewepụrụ ụdị ahụ.
Ekekọrịta Ozi dị iche iche - Revive Old Posts na-enye gị ohere itinye ọtụtụ ozi omenala na ọdịiche hashtag na posts gị maka ọtụtụ ndị ọzọ. Nyefee ozi gị n'ụzọ dị iche iche wee chọta nkọwa ntụgharị kachasị mma maka mgbasa ozi mgbasa ozi gị.
Gbalịa ịtụte akwụkwọ ochie
Ngosi: Abụ m mmekọ Dịghachi posts ochie
Tags: repost ochie postrepost na-elekọta mmadụịtụte akwụkwọ ochietụgharịa na-elekọta mmadụịkekọrịta ochie postsshare na-elekọta mmadụ mediaWordPresswordpress plugin
AdSense: Esi Wepu Mpaghara site na Mgbasa ozi Mgbakwunye